Izinqolobane Zokuzenzela - IntoKildare
Noma ngabe yikuphi lapho uthatha khona uhambo, indawo yokuhlala ozifunela yona eKildare ihlale iyisinqumo esihle uma ufuna inkululeko yamaholide nokuzihlola ngejubane lakho, ngenkathi uzicwilisa kunoma yikuphi lapho ukhetha khona.
Amadolobhana ase-County Kildare anempilo, amadolobhana anomlando, indawo yasemaphandleni ebukekayo kanye namabhange emisele amahle konke kuyikhaya lendawo yokuhlala enhle yokuziphekela, okusho ukuthi uchithekelwe yithuba lokuzikhethela. Kukhona uhla lwezindawo zokudlela eziziphekelayo e-Kildare ongakhetha kuzo. Kusuka izindawo zokulala zikanokusho emagcekeni enqaba, ezindaweni zokucasha ezithokomele osebeni lomfula, nokubuyela emvelweni amakotishi sibekwe endaweni yethu yasemaphandleni.
Bheka bese ubona ukuthi yiluphi uhlobo lokuziphakela oluthatha ubumnandi bakho!
Izindawo zokuhlala ezinezinkanyezi ezine endaweni enhle yokuhlola izindawo ezizungezile.
ISolas Bhride (ukukhanya / ilangabi likaBrigid) Isikhungo Sokukhulekela KobuKristu esigxile efeni likaSt. Brigid.